ကြက်ဥမှာ ပရိုတင်းပါဝင်မှုများသလိုသံဓာတ်ပါဝင်မှုလည်းများပါတယ်။ဒီဟင်းလေးကတော့ အရသာရှိပြီးကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့ဟင်းလေးပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အများကြီးကတည်းက ကျွန်တော့် ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကလေးတွေကို ချက်ကျွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေအမြဲကြိုက်ခဲ့တဲ့ recipe လေးပါပ။ဲ
ပုဇွန် 200 gm
ဝက်အူချောင်း 100 gm
ကြက်ဥ3လုံးဖေါက်ပြီးခေါက်ထားပါ
ပြောင်းဖုမူန့် 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
တရုပ်ဆန်အရက် 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
ငရုပ်ကောင်းမူန့်အဖြူ ½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
တရုပ်နှမ်းဆီမွှေး 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
ကြက်သွန်နီ 40 gmနုတ်နုတ်စင်းပါ
ဆား salt 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
ဆီ3စားပွဲစားဇွန်း
မှုန့် အနည်းငယ်နှင့် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်နပ်ထားပါ။ပြီးရင် ဆီ ၁ ၁/၂ စားပွဲစားဇွန်းကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီးအပူပေးပါ။ ဆီပူသည်နှင့် ဝက်အူချောင်းထည့်ကြော်ပြီးဆယ်ထားပါ။ ဒယ်အိုးထဲမှာ ကျန်တဲ့ဆီနှင့် ပုဇွန်ကို မီးအရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ကြော်ပါ။ ပုဇွန်ပန်းနုရောင်သန်းလာလျှင်ဆယ်ပြီးထားပါ။
ဒယ်အိုးကို ဆေးပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပါ။ ပြီးရင် ဆီ စားပွဲစားဇွန်း၁ ၁/၂ ခန့်ထည့်ပြီး အပူပေးပါ။ ဆီပူသည်နှင့် နုတ်နုတ်စင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်နီထည့်ပြီး ကြော်ပါ။ ပြီးလျှင် ကြက်ဥထည့်ပြီးမွှေပါ။ ပြီးရင် အဆင်သင့်ကြော်ထားတဲ့ ဝက်အူချောင်းနဲ့ပုဇွန်ထည့်မွှေပါ။မိနစ် ဝက်လောက်ဆိုရင် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ထမင်းဖြူ နှင့်တွဲစားပါ။
Kids Lunch Box Week -Fried Prawn & Chinese Sausage with Scramble Egg
Eggs haveahigh amount of protein also high in iron. Here’savery tasty and healthy recipe. I use to cook for my boss’s kids many yeas ago. Kids love it and they ask for more.
Chinese sausage 100 gm
Corn starch 1 tea spoon
Chinese rice wine 1 tea spoon
Onion 40 gm Chopped finely
Marinate prawns with chinese rice wine, sesame oil,corn starch,a dash of salt & pepper for 15 minutes.Heat 1 ½ tbs of cooking oil on high heat.And fry the chinese sausage forafew minutes and dish out and set aside but keep the remaining oil in pan.Heat the remaining oil on high heat and sauté the prawns until pink,transfer to the bowl and set aside.
Clean the pan,and add 1 ½ tbs of cooking oil add sauté the chopped onion until soft.And add egg and stir .Add chinese sausage and prawns back and cook for ½ minute.Serve with white rice.